Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Socdaaladii ugu Danbeeyey ee Mudo Sadex Cisho ah ku Mareyey Geeska AFrika – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Socdaaladii ugu Danbeeyey ee Mudo Sadex Cisho ah ku...
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Socdaaladii ugu Danbeeyey ee Mudo Sadex Cisho ah ku Mareyey Geeska AFrika
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abid Axmed, ayaa la kulmay xubno ka socday wadamada Geeska Afrika, si ay uga wada hadlaan labada dhinac.
Geeska ayaa ah hareeraha waqooyi-bari ee Afrika (qeybta bari ee Afrika) oo ka kooban Soomaaliya, Jabuuti, Eritrea iyo Itoobiya. Abiy ayaa todobaad in ka yar la kulmey hoggaamiyeyaasha oo aan ka ahayn madaxweynaha Jabuuti.
Wuxuuna bilaabey Axaddii (Maarso 3-deedii) markii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Abey Axmed ku imaadeen – duulimaadyo kala duwan – caasimada Eritrea, Asmara. Abiy ayaa horay martigeliyay Kenyatta oo booqasho rasmi ah ku tagay Itoobiya.
Iyadoo Itoobiya iyo labada nin ay la kulmeen Isaias Afwerki, waxay ku kulmeen shir saddex geesood ah, halka wadahadaladii labada dhinac ay yeesheen Eritrea iyo labada dal ee kale. Kulankii ugu horreeyay ee abid la yeeshay hogaamiyaha Geeska ayaa ahaa Eritrea.
Isniintii, Abiy iyo Afwerki ayaa u duuley Koonfurta Suudaan halkaas oo ay ka heleen marti qaad Koonfurta suudaan Madaxweyne Salva Kiir. Saddexda hoggaamiye ayaa wadahadal ku yeeshay amniga gobolka iyo isdhexgalka bulshada.
Kadib Talaadadii, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Addis Ababa u yimid wadahadalo laba geesood ah. Wadahadalada waxay diiradda saareen afar arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin:
i) Xoojinta nabadda iyo amniga gobolka heshiisyada horay loo saxiixay;
ii) Farsamo lagu hubinayo xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ee la xoojiyay;
iii) sii socoshada horumarinta dekadda; iyo
iv) hubinta in xiriirka ka dhexeeya maamulka Somaliland & Soomaaliya ay taageersan yihiin nabadda gobolka.
Abiy oo ay wehliyaan Farmaajo ayaa u duulay magaalada Nairobi ee Kenya halkaas oo dadaal dhexdhexaadin ah uu ka Galey Kenya iyo Soomaaliya in ay fududeeyeen xiisadaha diblomaasiyadeed ee dhowaan ka kacay muran xuduudaha badda.
Labada deris waxay xaqiijiyeen in ay dib u soo celinayaan xiriirka iyaga oo sugaya natiijada heshiisiin caalami ah oo ku saabsan arrinta.
In ka yar toddobaad Abiy ayaa Eritrea ku sugnaa, waxay martigelisay hoggaamiyaha Soomaalida waxayna gacan ka geysteen dhexdhexaadin ilaa xad ah muran ku saabsan Soomaaliya. Siday tahay shaqo diblomaasiyadeed oo ujeedadeedu tahay isdhexgalka gobolka iyo iskaashiga.
Dhammaan arrimahan waxay ku saabsan yihiin gadaashii taariikhiga ah ee July 2018 heshiiskii nabada ee lala galay Eritrea iyo Itoobiya – dhexdhexaadintii Soomaaliya ee Eritrea – Jabuuti oo isku haleeshay dhexdhexaadiintan waxaan arimahaas oo dhan sameeyey waa hal nin oo ah – Abi Ahmed.
Munaasabadda ugu weyn ee abaalmarinta Nobel Peace Prize ee mustaqbalka dhow? Hase yeeshee, qareen Itoobiyaan ah ayaa u maleynaya in Abiy uu helay abaalmarin
Nobel Peace Prize taas oo xaqiiqo ahna waa u qalmaa abaalmarinta. Waa wakhti go’an – yaa garanaya?
I hope the @NobelPrize committee, which reportedly received Abiy's nominations for the award early last month, is watching these developments. Abiy is a worthy candidate that accomplished so much already in this highly volatile region: Eritrea, South Sudan, & now Kenya-Somalia. https://t.co/0mHAmtmw86
— Awol Allo (@awolallo) March 6, 2019
Xafiiska wararka: Beegsonews
kala xidhiidh oo nagu soo gudbi aragtidaada
Previous articleCuntooyinka Fudud Oo La Ogaaday Inay La Dagaalamaan Cimri Dhererka !
Next articleDEG DEG:- Qarax Xooggan Oo Goordhow Ka Dhacay Muqdisho